Qala ekunene-iphiko lukhuni Isibetho sesithandathu
16. Meyi 2019
Steve Bannon, uGage Skidmore (Umfaki-zithombe), 2019
UStephen Bannon unokuchazwa njengesibetho. Ukuba ufanele usebenze naye nonke, ngoko kuphela ngenxa yokuba uhlanga, ungatsho ukuba ngumsebenzi we-neo-fascist wangaphambili waseGoldman Sachs uyingozi kwintando yeninzi.
I-Bannon ifikile eYurophu.
Isiseko sakhe I Movement itholakala kwi-villa yaseBrussels. Enoba konke kulungile nezinto - unokuqiniseka ngokuqinisekileyo. Kunye nomphathi we Vlaams Belang sele esebenza njengomhlalutyi okhutheleyo. Akazi into embi kakhulu. Ikhonkco yeBannon: "Wonke umntu ubona ingxaki kwi-Afrika engaphantsi kweSahara kunye neCentral America kwintlekele yabantu. Nangona kunjalo, kufuneka sisebenze kunye ukulungisa ingxaki kwilizwe ngalinye. Abantu abasebenza eYurophu nase-US akufanele bathathe iingxaki zezoqoqosho nezopolitiko zeAfrika kumahlombe abo. " Yiloo nto ayithethayo kwidolophu awayeyisebenzisa Stalingrad yo kusekwa ufuna ukwenza.
I-Bannon ayinqatshelwe kwaye ihamba ngabachasi bayo bezopolitiko, ezenzayo. Unentshukumo enobundlobongela obuvakalayo esongelayo. Kodwa inyikima yakhe enethemba elibomvu iya kuphelelwa, kwiintetho zaseYurophu njalonjalo. Abazalwana bakhe baseYurophu ngokomoya bahlula phakathi kwabo.
Enoba iBhannon nayo isetyenziselwa ubundlobongela, kufuneka icacise iinkonzo ezichaphazelekayo. Kuya kuba ngumdla kuzo zonke iidemokhrasi, utshaba olumiselweyo lwe-bannon lomgaqo-siseko alukwazi ukuhamba. Oko kwakuza kuhamba phambili okuya kubangela ukuba iMelika ibuyele.
Abantu abafuna iimpendulo ezilula kwiindawo ezikhoyo namhlanje baya kuzifumana eBannnon kunye noodade baseYurophu, njengesiFrentshi Fascist Le Pen, okanye abazalwana, njengesiGrike "Dawn". I-Bannon, iHetzer nge-House kunye neBrebbart-News, ifuna indawo yakhe yomsebenzi eYurophu, nangona emva kokuba uTrump imxoshe ngaphandle kweyadi. i Ukuqokelela kaZwelonke, iqela leLe Pen, lityholwa ngu-midweiler. Kwakhona, iBannon kufuneka ibe neminwe yakhe kumdlalo.
Ukunyanzeliswa kweBannon kwabangaphandle, abantu abancinci kunye nabanye bahlasela i-zeitgeist yezinto ezingenakulungelelanisa, kunye neidemokhrasi ezingenalutho, njengengomabhayisikobho embi. Umsunguli wafunda kwiphepha elifanelekileyo lokubambisa "Breitbart News"Khawuleza kakhulu. Ngobugqwetha kunye nokukhuthaza, izithembiso zezopolitiko zobuxoki yinto eninzi yokufumana.
Yena, owabonakala njengombhobho we-robber ngethuba le-1980 iminyaka yeGoldman Sachs e-Aquise, obambelela ifulegi lakhe e-USA, wayefuna ngephando elitsha umzekelo. Kubonakala ukuba uyifumene kwezopolitiko. Yaye yinto engcono kakhulu ongayibhala ngendoda eneenwele eziluhlaza.
I-Bannon iyingozi yokwenza uxolo loluntu, kwintando yesininzi efuna ukususa i-bastard eYurophu.
Kumele kucace kunoma ubani ogijimela abahlobo abalungile, iBannon imele i-Poltik yobudlelwane bobuzwe kunye nazo zonke iifomu ezikhoyo ezaziwa ngabantu.
Konke okuseleyo kukumemezela ukuba yi-persona non grata kwaye umxoshe e-United States. Abemi beColpardo, apho iBannon iqhuba khona, bayesaba uhlobo olutsha lwe-NAPOLA yaseNtaliyane. Ewe, ama-American amaqabunga ngemali, eninzi imali, ngoko iwa kwakhona kwiCawa yamaKatolika.
I-Italy ifuna ukuphelisa isivumelwano kunye neendwendwe ezikhoyo, enye iva eRoma. UStein Bannon kunye ne-Lega inkokheli uMatteo Salvini badibana, njani bekungenjalo, ngokubambisana nomrhwebi waseSicilian, osapho lwakhe olubhekiselele kwiCosa Nostra.
Kodwa iBannnon sele ikwazi ukulwa nolwaphulo-mthetho. UGiancarlo Parretti, i-film mogul ngokwayo, wayebizwa ngokuba yi-mafia. UBannon wasebenza ngokusondeleyo kunye neParetti, ngeli xesha njengomboneleli wenkonzo, xa uParretti ethatha i-MGM waza wayenza intombi yakhe ye-21 eneminyaka emibini ibhodi yekhampani yefilimu. Ingena kwiBannon, ohlala enxulumene kakhulu nomfazi ozikhukhumezayo-u-Hares Weinstein, ngekampani yefilimu yaseBennon eHollywood. Kwakhona kufanelana neFarage, owayengumthengisi wangaphambili kwi-mafia isakhiwo Refco bekunjalo kunye neBannon, ebenokuyibonakaliswa ngokuthe ngqo kunye nolwaphulo-mthetho oluhlelekile. I-Bannon iye yafumana amava amaninzi kunye nolwaphulo-mthetho ngokwesini kwabesetyhini. Waxoshwa ngenxa yale nto.
Umqeshi wangaphambili waseBannon, uDonald Trump, unxibelelwano olufanayo ulwaphulo mthetho, i ICasino e-Atlantic City Wathetha imiqulu malunga neTrump kunye nabaxhasi bakhe bokwenene, okwenzeka ngelanga kubandakanywa neBannon.
Enyanisweni, kunjengokuthi ulwaphulo-mthetho oluhlelekile kunye nabaxhaphazi besifazane bafuna ukuthatha ihlabathi.
Ngokuqinisekileyo oko kuya kuba sisibetho sesithandathu. Ngaphambi kokuba kwenzeke, iBannnon kufuneka isuswe ebomini yaseYurophu nayo yonke amandla emithetho.
5 (2 ivoti)
Ngaphezu kwe-100 efile ngumbulali obunzima?
Iintlungu nge Musical.ly
I-Addio, i-Italia- I-interjection
Inqaku langaphambiliUkufa okumangalisayo
Inqaku elilandelayoI-Strack roadway
lemazi 17. Mai 2019 at 10:31
Ekugqibeleni ufunda malunga nale ntambo yeenkathazo I-Trumps ngamazwi alungileyo.
Andiqondi ukuba kungani iBabinnon ingabanjwa. Andiyiqondi. Andiyi kuba yedwa kule ndawo.
Oorhulumente abaphazamisayo eYurophu banike amaNazi amathuba okubuyisela amandla kwakhona.